Maalmaha Xornimada Maalinta Xorriyadda Maaliyadeed | Ka wac + 91-993.702.7574 si aad ballansatid
Xorriyadda Maalinta Xorriyadda ee Xorriyadda
Maaha goor dambe in la badbaadiyo dhamaadka todobaadkan haddii aadan adigoon fasax ka qaadan fasaxa. Buug-yare Xasuuso Maaliyadeed oo gaar ah oo la socda 10% sicir-dhimis kaliya leh Dhaqaalaynta cagaarka ah ee safarka N Safarada. Inta u dhaxaysa asxaabta iyo qoyska, waxaad ka wada hadleyseen meel kasta oo aad tagi kartid - ku noqo gudaha waddanka, ama xitaa safar macquul ah oo aad u socoto meel aad u dhow. Laakiin inta udhaxeysa saacadaha shaqada iyo wax kasta oo kale oo dalbanaya baahidaada waqtiga iyo tamartaada, hadaba adigu ma awoodin inaad waxbarto ama aad sameyso baaritaan badan. Ha ka baqin, taasina waa sababta aan halkan u joogno. Dayactirka Dayaxa ee Maalinta Xor ah ee gaarka ah ayaa kuu xulan doona fasaxaaga. Ku dabaaldeg Maalintan Xorriyadda adoo buuxinaya rabitaankaada inaad ku safarto. Hel 10% sicir-dhimis dhammaan baakadaha la bixiyay. Xidhmooyinka Maalinta Xoriyadeed ee Xornimada Maalinta Xorriyadda waxaa loogu talagalay in lagu siiyo khibradda ugu dambaysa ee adiga iyo dadka aad jeceshahay. Dhamaanteen waxaan ku raaxeysaneynaa safarka, laakiin jadwalka jimicsiga iyo nolol mashquulka ah mararka qaarkood ma awoodno inaan ku raaxeysto wiiglaha wakhti dheer iyo inta badan ee aan ka fogaano. Laakiin maalinta madax-bannaanida, waxaad u safri kartaa meelaha aad ugu jeceshahay xagga geeska dalka iyo adduunka. Maskaxda ku hay in Xidhmada Maalinta Xoriyada Maalinta Xorriyadda ay tahay mid kooban, iyo inaad sida ugu dhakhsaha badan u qabato. Maalintan xoriyadaas waxaad ku safri kartaa kuwa aad jeceshahay meesha aad jeceshahay iyo meesha aad ku jirtid oo aanad daloolin jeebkaaga.
Dooro noocyada kala duwan ee Baakooyinka aad heli kartid meesha aad ku safartay. Haddii aadan weli go'aansan weli ama aad rabto in aad u qaabeysid goobaha safarka ama hudheelada ee ku yaala Xorriyadda Maalinta Xorriyadda Maalinta, markaa waxaan bedeli karnaa safarka safarka oo sameeya xirmo shakhsiyeed oo khaas ah, gaar ahaan adiga. Waxaan baddali karnaa baakada safarka sida miisaaniyada, miisaaniyada, muddada iyo goobaha dalxiis ee aad jeceshahay inaad booqato. Sidaa awgeed, maalinta madax banaani waxay dooraneysaa xorriyaddaada. Xorriyadda ka timaadda cadaadiska iyo jadwalaha jimicsiga oo aad tagto baakado safar oo cajiib ah oo ka socda Sandbirds Tour Tour Travels taas oo ku siinaysa xusuusin inaad ku qaddariso noloshooda.
Hoos waxaa ku yaala qaar badan oo ka mid ah baayacmushtarada la raadinayo ee soo booqdayashayada ee ku saabsan Maalinta Xornimada Maalinta Isniinta